२०३९ सालको जन्मको हिसावले दिलीप साह उत्ताल वेगवान वैशालु उमेरका हुनुहुन्छ तर राजनितिक सुझवुझ , गाम्भिर्य व्यवहार र दयित्ववोधले उनलाई परिपक्व रानितिज्ञ भन्न कर लाग्छ । त्यसको कारण हो , होस सम्हाल्ने उमेर सुरु हुनासाथ अर्थात ४ कक्षामा पढदा दखि नै उहाँ राजनितिमा लाग्नु भयो । कलरात्री पञ्चायत विरुद्ध जनमत तयार गर्न विद्यार्थी राजनिति उत्ष्कर्षमा थियो । प्रजातन्त्रको पुनरआगम पश्चात पनि विद्यार्थी राजनितिको प्रभाव छदै थियो । त्यसवेला वेला दिलीप साह अ.ने.रा.स्व.वि.यू मा आवद्ध हुनुभयो । विद्यार्थी राजनितिवाट राजनितिको कखरा सुरु गरेका दिलीप साह यतिवेला माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य हुनुहुन्छ । एउटा विशाल कम्यूनिष्ट पार्टीको पोलिटव्युरो सदस्य हुनु त्यत्तिकै संभव थिएन । त्यसको पछाडी २०५२ साल देखि सुरु भएको जनयुद्धमा उहाँ होमिनु भएको थियो । कुनैवेला सुरक्षा फौजको सर्वाधिक खोजी सुचीमा रहेका दिलीप साहले जनयुद्धमा अद्विय रणकौशल र राजनितिक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । जनमुक्ती संग्राममा उहाँको त्यही सुझवुझपूर्ण भूमिकालाई मध्यनजर गरी क्षमताको आधारमा पार्टीले उहाँलाई पोलिटव्युरोमा वरण गरेको हो ।
मृदुभाषी ,मिलनसार र ईमान्दार छविका धनी माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य दिलीप साह यतिवेला संयुक्त वाम गठबन्धनका तर्फवाट सिरहाको क्षेत्र नं. ४ को प्रदेश क वाट प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । उहाँको चुनाव चिन्ह हो गोलाकार भित्रको हसिया हथौडा । दिलीप साहसंग अनुकल्प दैनिकका सम्पादक अर्जुन थपलियाले गर्नुभएको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।
प्रश्न ः निर्वाचनमा उम्मेदवार त बन्नु भयो । तपाईले जित्ने आधार के के छ ?
हामीले जित्ने आधारहरु प्रसस्त र भरपर्दो पनि छ । मिर्चैया नगरपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका दुवै स्थानमा स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एक्लै शानदार विजय हाँसिल गरेको क्षेत्र हो । यी दुवै नगरपालिकामा दोश्रो स्थानमा एमाले थियो । एमाले र माओवादीको संयुक्त वाम गठबन्धन बनेको छ र हामी साझा उममेदवार छौ । वाम गठबन्धनको मत एक ठाउँमा पार्दा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । डेढ महिना अघि भएको निर्वाचनमा ८० प्रतिशत मत ल्याउने वाम गठबन्धनले अहिले पनि त्यत्तिकै मत ल्याउने निश्चित छ । यो भन्दा पहिलेको संविधान सभा निर्वाचनमा पनि एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले करी करीव ८० प्रतिशत मत ल्याएको स्थान हो यो । यहाँ वामपन्थीहरुको होल्ड छ । यो अजेग दुर्ग हो वामपन्थीको । यहाँ अन्य शक्तिले नचिताए पनि हुन्छ ।
अर्को आधार भनेको कमरेड अजय शंकर नायक र म दिलीप साह यसै क्षेत्रलाई कर्मभूमि बनाएर राजनिति गरेका उम्मेदवार हौं । यहाँको पात पात हामीलाई ज्ञात छ । जनतासंग उठवस छ । जनतासंग सुमधुर सम्बन्धमा छौ हामी । जनयुद्धकालको पनि आधार क्षेत्र हो यो । वाम गठबन्धनको विचमा मजवुत एकता छ । त्यसकारण हाम्रो जित निश्चित छ । कमरेड अजय शंकर नायक , कमरेड तुलसी यादव र म दिलीप साह तीनै जनाको जित हुन्छ । यो वाम क्षेत्रको ईतिहास रचना गर्ने भूमि हो ।
प्रश्न ः तपाईले जित्नु भए पछि यस क्षेत्रमा के के बिकास गर्ने आस्वासन दिनु हुन्छ जनतालाई ?
हो अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा भनेको नै बिकासको मुद्दा हो । मुद्दा अरु पनि छन् तर बिकासको मुद्दा पहिलो मुद्दा हो । जनताले देखिने गरी , अनुभुति गर्ने गरी बिकास हेर्न चाहेका छन् । भौतिक सुख सुविधा भोग्न चाहेका छन् । २१ सौं सताव्दी अनुकुलको सेवा सुविधा उपभोग गर्न चाहेका छन् । जुन नाजायज पनि होईन । जनताको चाहना विलकुल जायज छ ।
मिर्चैया शहरलाई हेर्नुहोस् । यहाँ स्थानीय पुँजीको कमी छैन । एक से एक पुँजीवालाहरु छन् यहाँ । तर पुँजी लगानी गर्ने , उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण छैन । सरकारले पुँजी परिचालनको लागि उद्योग धन्दा खोल्न स्थानीय राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुको परिचालन गर्न सकेको छैन । फलत मिर्चैया शहर अझै ग्रामिण वजारको स्तरवाट माथी उठ्न सकेको छैन । मिर्चैया शहरलाई आधुनिक शहरको रुपमा बिकसित गर्नुपर्छ । उदोग धन्दा आकर्षित गर्नु पर्छ । वाह्य पुँजी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । मिर्चैयामा नयाँ उद्योगको स्थापना गरी हजारौ रोजगारीको श्रृजना गर्ने छौ
सर्वप्रथम मिर्चैयालाई डुवान मुक्त शहर बनाउन आवशयक छ । चुरे क्षेत्रवाट वगेर आउने पानी वर्षायाममा सिधै वजारमा प्रवेश गर्छ । त्यसका लागि जिवा गाउँ र मिर्चैया वजारको विचवाट ढल बनाएर बाढीलाई जिवा र बतहा नदीमा खसाल्ने कार्य गर्नुपर्छ । हामी यो काम एक वर्ष भित्र संपन्न गर्ने छौ । मिर्चैया वजारमा भएका अधुरो नाला र अधुरो पिचिङ्ग कार्यलाई एक वर्ष भित्र पुरा गर्नेछौ । एक वर्ष भित्रै मिर्चैया डुवान मुक्त हुने छ ।
विकासको मूल पूर्वाधार वा प्रस्थान विन्दू भनेको सडक हो । मिर्चैया कल्याण्पुर सिरहा सडक र वस्तिपुर कर्जन्हा सिरहा सडकलाई दुईलेनको पक्की बनाउन दुई वर्ष भन्दा अधिक समय लगाउँदैनौ । यस वाहेकका ग्रामिण सडकहरुको पनि स्तरोन्नति गर्ने छौ । मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिका भित्र २५० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गराउने छौ ।
मिर्चैया शहरमा ५० शैय्याको एक सुविधा संपन्न अस्तालको आवशयकता छ । २ वर्ष भित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शैय्याको अस्पतालमा रुपान्तरित गर्ने छौ । राजमार्ग देखि उत्तरमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न ३ वटा ओभर हेड पानी टंकी अझै थप गर्ने छौ । मिर्चैया कटारी सडक दुईलेनको पिचिङ्ग एक वर्ष भित्रै संपन्न गराउने छौ ।
गरीब दलितहरुका लागि जनता आवास मार्फत ५ वर्षमा ५ हजार परिवारलाई घर उपलव्ध गराउने छौ । हरेक घरमा विद्युत पुर्याउँने छौ । प्रत्येक १० विगहा जमिनमा एक पावरड्रिल वोरिङ्ग जडान गरी कृषकलाई सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने छौ । मिर्चैयामा डिग्री तहसम्मको एक बहुमुखि क्याम्पस स्थापना गराउने छौ । सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सुधार गरी निशुल्क तथा गुणस्तरी शिक्षाको प्रवन्ध मिलाउने छौ । गरीव दलित विद्यार्थीहरुको लागि विशेष छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने छौ । चुरे संरक्षणको विशेष कार्यक्रम ल्याउने छौ ।
शिपमुलक शिक्षा र तालिम दिई २ लाखसम्म विना व्याज र विना धितो ऋण लिएर युवाहरु स्वरोजगार हुने कार्यक्रम ल्याउने छौ ।
कर्जन्हाको शहरीकरण गर्न ढल, पिचिङ्ग , खानेपानी , विजुली जस्ता आधारभूत भौतिक सुविधामा वृद्धि गर्ने छौ । कजन्हामा स्नातक तहसममको एक क्याम्पसको स्थापना गराउने छौं । उत्तरायनीलाई राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन क्षेत्र बनाउने छौ । दुई वर्ष भित्र बन्दीपुर उत्तरायनी सडक कालोपत्रे गराउने छौ । कमला नदीको तटबन्धलाई मजवुत हुने गरी मर्मत सम्भार गराउने छौ । यी हाम्रा प्रमुख प्राथमिकतामा परेका कार्यहरु हुन् ।
प्रश्न ः वाम गठबन्धन त भयो तर कार्यकर्ता स्तरमा कतिको एकता देखिन्छ ?
वाम एकता अव टारेर नटर्ने आवश्यकता र सत्य भएको छ । निर्वाचन पछाडी तत्कालै दुवै पार्टी एक हुन्छ । यो कुरा सम्पूर्ण कार्यकर्ता तथा साधारण सदस्य तथा पार्टी समर्थकहरुलाई राम्रोसंग अनुभूति भएको छ । देश र जनताको आवश्यकता , समयको माग र राजनितिक परिस्थितिले निम्त्याएको सहज तथा उचित समयमा हाम्रा आदर्नीय नेताहरुले पार्टी एकताको निर्णय गर्नु भएको छ । अव राष्ट्रलाई समृद्धि तर्फ लानु छ । समाजवादी क्रान्ति पुरा गरी सवै नेपालीलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनु छ । यो कुरा कार्यकर्ता तहले पनि बुझेका छन् । त्यसकारण वाम गठबन्धन मात्र कागजमा सिमित छैन । कार्यकर्ताहरुको हार्दिकतासम्म पुगेको छ । वाम एकतामा कही कतै कुनै समस्या र व्यावधान छैन । दुवै पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेता कुम जोडेर निर्वाचन जिताउ अभियानमा सरिक छन् । कसैले फुटाउन वा भाँजो हाल्न चाहेर पनि सक्दैनन् । कार्यकर्ताहरु नै भन्छन् यो एकता अझै अगाडी हुनु पथ्र्यो । आखिर स्कूलिङ्ग एउटै हो माक्र्सवाद । त्यसकारण एकतामा कुनै समस्या छैन । पार्टी एकिकरण हुन लागेकोमा र गठबन्धन भएकोमा दुखि भएको एक जना पनि भेटिएको छैन ।
प्रश्न ः अरु थप कुरा केही भन्नु छ ?
सवैलाई थाहा छ आगामी सरकार वाम गठबन्धनको हुन्छ । सामान्य बहुमतको लागि त केही गर्नै पर्दैन । हामी दुई तिहाई बहुमत ल्याउन कसरथ गरिरहेका छौ । किनकी समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्न शक्ति चाहिन्छ । हामी दुई तिहाइृको शक्ति सहित राज्य सत्ताको वागडोर थाम्न चाहान्छौ । किनकी विना कुनै व्यावधान देश र जनताको हितमा काम गर्न सकियोस् । प्रतिक्रियावादीहरुको कुनै जोर नचलोस् । तयसैगरी केन्द्रमा वाम सरकार भए पछि प्रदेशमा पनि वाम सरकार हुन आवशयक छ । तव मात्र बिकास प्रकृयाले द्रुत गति लिन्छ । स्थानीय निकायमा हामी नै छौं । त्यसकारण हामी आग्रह गर्न चहान्छौ महान मतदातासंग , आदर्नीय जनतासंग । यस पटक वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई छानी छानी मत दिनुस् । देशलाई समृद्धिमा पुर्याउने कार्यमा एउटा ईटा थप्नुहोस् । प्रदेश ख मा तुलसी यादवलाई सूर्य छापमा मत दिएर जिताऔं । प्रदेश क मा म दिलीप साहलाई र प्रतिनिधि सभामा कमरेड अजय शंकर नायकलाई गोलाकार भित्रको हसिया हथौडामा मत दिई जिताउनुस् । हामी हाम्रो प्रतिवद्धता पुरा गर्न शपथ खाएको भोली पल्ट देखि नै सकृय रहने छौ ।